Kuongorora kweKufunga uye Kuparadzwa - The Word Foundation
Kuongorora kweKufunga neKuparadzwa
Kufunga Nekupedzisira Mubhuku
Ini pachedu ndinofunga Kufunga Nekupedzisira kuti ave bhuku rinokosha uye rinokosha rakambobudiswa mumutauro chero upi zvake.
Mharidzo yangu chete yakakurumbira "Ndinokutendai." Bhuku iri rakakanganisa nzira yangu, yakazarura mwoyo wangu uye ikandishamisa kumwoyo wangu! Ndinobvuma kuti kuoma kwezvimwe zvinhu zvinondiomera uye ini handisati ndanyatsonzwisisa zvimwe, kana zvisingaverengeki, zvemashoko acho. Asi, icho chikamu chechikonzero changu chokufara! Nomumwe nomumwe kuverenga ndinowana zvishoma kunzwisisa. Harold ishamwari mumoyo mangu, kunyange zvazvo ndakanga ndisingakoshi kuti ndikasangana naye. Ini ndinoonga nheyo dzekuita zvinhu izvozvi pachena kune avo vedu vaida. Ndinogara ndichionga!
Dai ndakanga ndasungwa pachitsuwa uye ndikabvumirwa kutora bhuku rimwe, iyi yaizova bhuku.
Kufunga Nekupedzisira nderimwe remabhuku iwayo asingagoneki ayo achange ari echokwadi uye anokosha kune vanhu makore zviuru gumi kubvira ikozvino sezvazviri nhasi. Ihwo hupenzi hwepfungwa uye hwemweya hahuperi.
Sezvo Shakespeare ari chikamu chemakore ese, ndizvo zvazviri Kufunga Nekupedzisira bhuku revanhu.
Zvechokwadi Kufunga Nekupedzisira ihwo humwe hukuru hwekuzarurwa kwenguva yedu.
Kufara nekudzika kwe Kufunga Nekupedzisira yakakura, asi mutauro wayo wakajeka, wakajeka, uye une rudo. Iri bhuku nderepakutanga zvachose, zvichireva kuti zvakanyatsobva mukufunga kwaPercival, uye nekudaro ndere jira rakazara, rinoenderana mukati mese. Haafungidzire, haafungidzire kana kufungidzira. Haaite zvekutaura zvevabereki. Ikoko kunoratidzika kuve kusina izwi kunze kwenzvimbo, hapana izwi rinoshandiswa zvisirizvo kana risina kukosha. Mumwe anowana zvakafanana nekuwedzeredzwa kweakawanda akawanda mamwe misimboti nemifungo iri mune yeWestern Wisdom Dzidziso. Mumwe zvakare anowana zvakawanda izvo nyowani, kunyangwe novel uye anozopikiswa nazvo. Nekudaro, zvingave zvine hungwaru kusamhanyira kutonga asi kuzvidzora nekuti Percival haana hanya nekuzvidzivirira kubva mukusajairika kwemuverengi nemisoro sezvaari kuita nekufunga kwemharidzo yake kunoraira nguva uye kuteedzana kwezvaanozivisa. Kuteterera kwaHeindel mu "Shoko kune Vakachenjera" kungave kwakaringana kana uchiverenga Percival: "zvinokurudzirwa kuti muverengi arege kutaura kwese kurumbidza kana kupomera kusvikira kudzidza kwebasa kwamugutsa zvine hungwaru kana kukanganisika."
Bhuku harisi regore, kana remakore, asi panguva. Inotsanangura nheyo yepamusoro yezvetsika uye inogadzirisa matambudziko epfungwa akambovhiringidza munhu kwemakore.
Iri nderimwe remabhuku akakosha kwazvo akambonyorwa munhoroondo inozivikanwa uye isingazivikanwe yepasi rino. Iwo mazano uye ruzivo rwakataura kukwidza kune kufunga, uye vane "mhete" yechokwadi. HW Percival anenge asingazivikanwe anobatsira vanhu, seizvo zvipo zvake zvekunyora zvicharatidza, kana zvisina tsvete. Ndiri kushamiswa nekushaikwa kwebasa rake rounyanzvi mune akawanda "akakurudzirwa kuverenga" rondedzero kumagumo emabhuku mazhinji akakomba uye akakosha andakaverenga. Iye ndiye chaiye zvakavanzika zvakachengetedzwa kwazvo munyika dzevanofunga varume. Kunyemwerera kunofadza uye manzwiro erutendo anoburitswa mukati, pese pandinofunga nezveiye akaropafadzwa munhu, anozivikanwa munyika yevarume saHarold Waldwin Percival.
Kufunga Nekupedzisira inopa ruzivo rwandakave ndaritsvaga narwo. Icho chinhu chisingawanzovi, chine ruzivo uye chinokurudzira kuvanhu.
Handina kumbonyatsonzwisisa, kusvikira ndagamuchira Kufunga Nekupedzisira, kuti isu tinonyatsozvifungidzira sei zvatinoda nemafungiro edu.
Kufunga Nekupedzisira akauya Mari Zvakanaka hazvikwanisi kuzvidzikinura. Ndanga ndichiri kutsvaga hupenyu hwangu hwose.
Pashure pemakore e30 ekutora manotsi makuru kubva mumabhuku mazhinji pamusoro pepfungwa, mafilosofi, sayenzi, chimiro chemasikirini, theosophy uye zvinyorwa zveshamwari, bhuku iri rinoshamisa ndiro mhinduro yakakwana kunezvose zvandave nditsvaga kwemakore akawanda kudaro. Apo ini ndinotora zviri mukati mazvo zvinogadzirisa rusununguko rukuru rwepfungwa, rwepfungwa uye rwepanyama nekufuridzirwa kwepamusoro zvokuti mazwi haagoni kutaura. Ndinofunga kuti bhuku rino rinokurudzira uye rinoratidza kuti ndakambonzwa kufara kuverenga.
Nguva ipi zvayo pandinozviona ndichitsvaira kuora mwoyo ndinozarura bhuku nguva dzose uye ndinowana chinhu chaicho chandinofanira kuverenga chinondipa kusimudzira uye simba randinoda panguva iyoyo. Chokwadi tinogadzira hurongwa hwedu kuburikidza nekufunga. Izvo zvakasiyana sei upenyu dai taidzidziswa kuti kubvira pakuzvarwa.
Mukuverenga Kufunga Nekupedzisira Ndinozviona ndakashamisika, ndakashamiswa, uye ndakanyanya kufarira. Iko bhuku! Ndezvipi pfungwa itsva (kwandiri) dzine!
Yakanga isiri iyo ini ndakatanga kudzidza Kufunga Nekupedzisira kuti ndakaona kufambira mberi kwechokwadi kuri kuitika muupenyu hwangu.
Kufunga Nekupedzisira naHW Percival nderimwe remabhuku anoshamisa akambonyorwa. Inobata nemubvunzo wekare-makore, Quo Vadis? Takabva kupi? Nei tiri pano? Tiri kuenda kupi? Anotsanangura kuti mifungo yedu pachedu inova sei magumo edu, sezviito, zvinhu, uye zviitiko, muhupenyu hwedu hwega. Kuti mumwe nemumwe wedu ndiye ane mhosva nepfungwa idzi, uye nemhedzisiro yazvo patiri nevamwe. Percival anotiratidza izvo zvinoratidzika se "mhirizhonga" muhupenyu hwedu hwezuva nezuva zvine chinangwa uye Kurongeka kunoonekwa kana isu tikazotanga kutarisisa kufunga kwedu, uye kutanga Chaiko Kufunga, sezvakatsanangurwa mune yake yehunyanzvi. Percival pachake anobvuma kuti haasi muparidzi kana mudzidzisi, asi anotipa kwatiri cosmology yakavakirwa paUngwaru. Izvo zvakasarudzika zveHurongwa uye Chinangwa. Hakuna bhuku remadimikira rakamboburitsa yakajeka, yakapfupika, ruzivo rwuripo mubhuku rino. Chokwadi rakafuridzirwa uye rinokurudzira!
Handina kumbobvira ndava, uye ndave ndakatsvaga chokwadi chekutsvaga hupenyu hwangu hwose, ndakawana huchenjeri hwakawanda nekujekesa sezvo ini ndichiramba ndichizviona Kufunga Nekupedzisira.
Kufunga Nekupedzisira zvinongoshamisa kwandiri. Izvo zvandiita nyika yezvakanaka uye ndeyechokwadi mhinduro yezera iri ratinorarama.
Pamwe, ndinofunga kuti Uchenjeri-Kunzwisisa kwakanyanya-uye ruzivo rwakanyatsojeka uye rwakanyatsoratidzwa Kufunga Nekupedzisira neHW Percival haigoni kutengesa. Iyo inoshongedza nevekare vanyori vakuru pamusoro pezvitendero zvenyika, avo, vachienzanisa naPercival, vanoita sevasina kujeka, vasinganzwisisi uye vanovhiringidza. My estimation yakabva paCNUMX makore ekutsvakurudza. Ndizvo chete Plato (baba vokuWestern philosophy) uye Zen Buddhism (zvakasiyana) vanouya chero kupi zvako pedyo naPercival, uyo anounganidza zvose zviri zviviri uye zvakazara!
Percival zvechokwadi 'akabaya chifukidziro,' uye bhuku rake rakazarura zvakavanzika zvezvinhu zvose kwandiri. Ndakanga ndakagadzirira jekete rakasimba kana boneyard pandakaiswa bhuku iri.
Kusvikira ndawana bhuku iri ini handina kumboita sevepanyika iyi yepamusoro-soro, saka yakandigadzirisa kunze nekukurumidza kukuru.
Kufunga Nekupedzisira ishoko rakanaka chaizvo pane zvakasiyana-siyana zvemashoko ezvinyorwa uye chimwe chinhu chenyenzikodhi munyaya iyi. Ndine chokwadi chokuti ndicharamba ndichitaura nezvazvo mune zvidzidzo zvangu uye nebasa rangu.
Ndave ndichidzidza zvakawanda kuraira kwemakore uye murume uyu akazviziva uye akaziva kuti angazvibatanidza sei pamwe chete uye akaisa pfuma yekucheka hupenyu hupi uye isu tiri ani / hatisi.
Pasinei nokuverengwa kwangu kwakanyanya muTheosophy uye mumatauriro akawanda emagariro, ini ndichiri kunzwa zvakadaro Kufunga Nekupedzisira ndiro bhuku rinoshamisa kwazvo, rakazara, uye rinonyanya kunzwisisa. Ndiyo imwe chete yevhesi yandingarambe ndiine, dai ndakanga ndine chikonzero chakaparadzana chemamwe mabhuku ose.
Ndaverenga Kufunga Nekupedzisira kaviri iko zvino uye haatombogoni kutenda kuti bhuku rakadaro rakakura zvechokwadi riripo.
Mumakore makumi emakore adarika ndave ndakanyatsoongorora zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvine chokuita nemamiriro evanhu mupfungwa shoma pamwe chete nepamusoro-soro. Zvechokwadi, vashomanana chaizvo zvezvikoro nemabasa andakadzidza aiva nechimwe chinhu chakakosha kupa pamusoro pehupenyu chaihwo hwevanhu uye chinangwa chake. Uye rimwe zuva rakanaka kwazvo randakapinda naro Kufunga Nekupedzisira.
Somunhu-psycho-physotherapist nehutano, ndakashandisa mabasa aVaPercival kuti awedzere kuporesa uye kunzwisisa kwevanhu vazhinji vakavhiringika-uye inoshanda!
Murume wangu neni tose tinoverenga zvikamu zvemabhuku ake zuva rega rega, uye taona kuti chero chii chiri kuitika, kana mukati kana kunze, chinogona kutsanangurwa kuburikidza nemafungiro ake echokwadi. Akaisa urongwa muhunoita sehupenzi hwandinocherechedza ndichienda kumativi ose zuva rose. Nheyo dzakagwedezeka dzakagadzikana mukati mekudzikama pasina kutya. ndinotenda Kufunga Nekupedzisira iri ndiro bhuku rakanakisa zvikuru rakambonyorwa.
Bhuku rakanakisisa randati ndamboverenga; zvakadzama uye rinotsanangura zvese nezvekuvapo kwemunhu. Buddha akataura kare kuti pfungwa iyi ndiyo mai vezvese zvinoitwa. Hapana chinhu chiri nani kupfuura bhuku rino kutsanangura zvakadzama. Ndatenda.
Tose takanzwa mazwi maviri aya kakawanda, "Nezvose zvaunowana, uwane kunzwisisa," uye "Munhu azive iwe pachako." Handizivi mumwe munhu zviri nani kutanga kutora kuguma uku kupfuura kuburikidza nemabasa aHarold W. Percival